Dongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Shona – qnc jelly gamat asli terbaik
20 Januari 2017 20 Desember 2016 qncjellygamatasliterbaik
Noumwe nguva maigara akanaka vamoyo chete akanaka ganda uye meso yebhuruu. Akafara zvokuti akanaka kuti ainzi Snow White. Amai vake vakafa apo Snow White aiva mwana uye baba vake akaroora zvakare. mambokadzi uyu aiva tsvarakadenga chaizvo asi akanga ane utsinye.
Vakaipa naamainini aida kuva mukadzi yakaisvonaka muumambo uye iye angadai kazhinji kubvunza mashiripiti girazi wake, “Mirror! Girazi pamadziro! Ndiani fairest pavo vose? “Uye vaiita girazi aiti,” Ndimi, Changamire! “Asi rimwe zuva, ari girazi akapindura,” Snow White ndiye fairest wavo zvose! “Mambokadzi akaipa akatsamwa kwazvo uye godo Snow White. Iye akarayira kwake huntsman kutora Snow White sango ndimuuraye. “Ndinoda kuti adzose mwoyo wake,” iye akarayira. Asi kana huntsman ndokusvika sango pamwe Snow White, akamunzwira tsitsi naye ndimushandure vakasununguka. Akauraya nondo akatora mwoyo wayo kuna mambokadzi akaipa uye akamuudza kuti akanga auraya Snow White. Snow White akadzungaira musango usiku hwose, ndichichema.
Kwakati kwaedza, iye akasvika duku yokurenda akaenda mukati. Musina munhu, asi iye akawana mahwendefa nomwe patafura uye pamibhedha duku nomwe mumba mokuvata. Achibika zvokudya zvinoshamisa uye ndaichenesa imba uye vaneta, pakupedzisira tairara rimwe duku mibhedha. Usiku, ivo dwarfs nomwe vaigara koteji akauya kumba vakawana Snow White akarara. Kana iye akamuka uye akavaudza nyaya yake, iyo dwarfs nomwe akamubvunza kuti agare navo. Apo dwarfs vaiva kure, Snow White aizoita zvinonaka zvokudya kwavari. The dwarfs akamuda uye akatarisira naye. Ose mangwanani, apo vakasiya imba, vakarayira naye haana kuzarura musuo vatorwa.
Zvichakadaro, vari mumuzinda, mambokadzi akaipa akabvunza, “Mirror! Mirror pamusoro Ndiani fairest pavo.
The girazi akapindura, White ndiye fairest pavo vose! Anogara aine dwarfs nomwe mumasango! “Wakaipa naamainini akatsamwa. Akanga chaizvoizvo muroyi aiziva kuti mashiripiti potions. Iye zvino akaita uturu waizoita ndokunyika ane kupenyerera dzvuku apuro mariri. Ipapo iye somumwe akazvisuma ive mukadzi murimi mudiki akwegura uye akaenda musango pamwe apple. Iye vakagogodza pamusuwo koteji akati “Pretty muduku! Ndipinze! Tarirai chandinacho kwamuri! “White akati:” Ndine urombo, ambuya, handigoni regai nemi! The dwarfs manomwe akandiudza kutaura vaeni! “Asi zvino, Snow White akaona kupenyerera tsvuku Apple, uye akazarura musuo. Vakaipa muroyi zvaaipiwa Apuro uye kana iye akatora nokuruma murombo Snow White akawira nehope. Vakaipa naamainini akadzokera mumuzinda ndokubvunza girazi, “Mirror! Girazi pamadziro! Ndiani fairest pavo vose? “The girazi akapindura,” Muri, Changamire! “Uye aifara chaizvo.
Apo dwarfs nomwe akauya kumba kuwana Snow White akarara pasi, vakanga vakatsamwa kwazvo. Vakachema usiku hwose uye ipapo akavaka girazi mubhokisi nokuda Snow White. Vakachengeta pabhokisi pamberi yokurenda. Rimwe zuva, Prince Charming aienda apfuura koteji uye akaona Snow White avete pabhokisi. Akati dwarfs, “My! My! Iye saka akanaka! Ndinoda kutsvoda kwaari! “Uye akaita. Pakarepo, Snow White akavhura maziso ake. Akanga mupenyu zvakare! The Prince uye nomwe dwarfs vakafara chaizvo. Prince Charming akaroora Snow White akaitora kumuzinda wake akararama vachifara nokusingaperi.
Tulisan SebelumnyaDongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Sesotho